Ampio ny horonantsary: ​​maninona no atao izany sy ny programa hampihenana ny habe | Famoronana an-tserasera
Rehefa voafintina ny zavatra iray, dia manjary very endrika izy ary miseho ambany kalitao noho ny andrasana. Raha resaka famatrarana horonantsary no resahina, dia mirona ihany koa izany, ary very ny kalitao noho ny lanjany kely kokoa. Ahoana anefa raha milaza aminao izahay fa afaka mamehy horonantsary iray nefa tsy mamoy kalitao?
Raha toa ianao ka mandefasa horonan-tsary mavesatra loatra ary mila mametaka azy ianao, fa tazomy ny sary araka ny sary, dia mahaliana anao izany satria misy programa marobe izay hanampy anao hitazona ny soatoavina manan-danja nefa tsy mavesatra ny fandefasana azy. Te hahafantatra amin'ny fomba ahoana ianao?
1 Hamafiso ny horonan-tsary ary tsy hahavery kalitao, azo atao ve izany?
2 Fandaharana hamoahana horonantsary misy kalitao
2.1 Hamafiso ny horonan-tsary: ​​HandBrake
2.3 Horonan-tsarimihetsika: VLC
2.4 Free Converter Video HD
3 Misy pejy web hanovana video?
Hamafiso ny horonan-tsary ary tsy hahavery kalitao, azo atao ve izany?
Raha ny tena izy dia tsy afaka mahazo ny zava-drehetra ianao. Izany hoe tsy afaka mamehy horonantsary ianao ary tsy hahafoana kalitao izany. Fa ny herinao dia ny hoe, rehefa mampihena ny lanjan'ity rakitra ity dia kely dia kely ny kalitao mihena, amin'ny fomba izay hitohizany ho avo, fa tsy ho toy ny voalohany.
Mariho fa, rehefa mampihena ny haben'ny horonan-tsary ianao, ny zavatra ataony dia ny manala ireo angona avy amin'ity horonantsary ity, toy ny taham-data, ny bitrate ... ary izay rehetra mety ho ratsy amin'ny fahitana ilay horonantsary manana kalitao tsara indrindra. Tsy azo ihodivirana izany.
Ankehitriny, tsy midika izany fa hanana vokatra mahatsiravina ianao, fa pixelated, mijanona, tsy dia tsara tarehy ... Misy programa izay afaka manampy anao hamintina horonantsary nefa tsy voamariky ny fahaverezana. Misy izany, hisy, saingy mety ho kely saina amin'ny hafa izany.
Fandaharana hamoahana horonantsary misy kalitao
Alohan'ny handehananao miresaka momba ireo programa samihafa azonao ampiasaina haneriterena horonan-tsary dia tokony ho tadidinao fa, raha mampiasa pejy an-tserasera izay angatahin'izy ireo aminao ianao hampakatra ilay horonantsary dia tsy fantatrao tsara izay alehany ataovy izany satria hampiantrano azy ireo amin'ny mpizara azy ireo ary tsy voafehinao intsony ny fampiasan'izy ireo. Na dia tsy misy na inona na inona mitranga, tsy midika izany fa tsy miaro ny zavatra noforoninao ianao ka mamporisika anao, isaky ny azonao atao, ny mampiasa ireo programa amin'ny solosainao (na dia midika aza izany fa mametraka azy ireo sy mandany toerana aminy).
Ity dia nilaza fa ireto programa atolotray ireto dia ireto manaraka ireto:
Hamafiso ny horonan-tsary: ​​HandBrake
HandBrake dia programa fanovana horonantsary malaza. Ary izany dia satria mamela anao hametraka azy amin'ny Windows, Linux ary Mac, izay manolotra fahasamihafana amin'ny fampiasana azy.
Momba ny programa sy izay olana momba anay dia azonao atao izany mampihena ny lanjan'ireo horonan-tsary misy fatiantoka kely amin'ny kalitao ary mamela anao hifehy ireo masontsivana video ihany koa toy ny fanapaha-kevitra, ny taha kely, esory ny lalana am-peo, ny codec video ...
Ary ny tsara indrindra dia maimaim-poana. Ny fidirana ao amin'ny tranokalany dia afaka mahita ireo alaina arakaraka ny rafitra fiasao.
Amin'ity tranga ity, ity dia iray amin'ireo programa fanovana horonantsary malaza indrindra. Ankoatry ny manompo amin'ny compresse, azonao ampiasaina amin'ny zavatra maro hafa toy ny fanovana ny endrika, ny fiasa amin'ny 4K, sns.
Tsy manana afa-tsy olana iray izy ary izany dia tsy afaka 100%. Izy io dia manana kinova voafetra fa raha te hanana ny azo atao rehetra ianao rehefa miasa miaraka aminy dia mila ilay kinova aloa. Ary zavatra iray hafa, tsy misy afa-tsy amin'ny Windows sy Mac izy io.
Azo antoka fa toa anao ity programa ity. VLC dia iray amin'ireo programa handefasana horonantsary fantatra manerantany. Fa ny tsy fantatry ny maro dia ny fahaizanao mamehy horonantsary.
Mba hanaovana izany dia mamela anao hisafidy tsy izay tianao hikiretaka fotsiny fa ny fomba fanaovana azy ary inona ny endrika famoahana azonao omena azy.
Ny vaovao tsara dia hoe, rehefa miresaka famoretana horonan-tsary dia kely dia kely ny fatiantoka kalitao amin'ity programa ity.
Free Converter Video HD
Raha mitady fitaovana tsotra hamehezana horonantsary ianao ary tsy manafana be ny lohanao dia azonao ity iray ity. Avy amin'ny Windows ihany izy io ary rehefa apetrakao io dia ho afaka hampihena ny haben'ny horonan-tsary tadiavinao ianao nefa tsy hahafoana kalitao. Raha ny marina dia miasa saika amin'ny fomba mandeha izy io satria hanana bara ianao izay manapa-kevitra hoe ohatrinona no tianao hampihena ny kalitao ary hatraiza ny faneriterena tianao.
Ny marina dia tsy tsara amin'ny zavatra hafa io, koa mihinana aho Fandaharana manokana ho an'ity fiasa ity no tsara be. Ny lafiny ratsy fotsiny hitantsika dia ny an'ny rafitra fandidiana iray ihany.
Ho an'ny Windows ihany ity programa ity, saingy malaza be io. Azo ampiasaina amin'ny Windows Vista, 7, 8, 8.1 ary Windows 10. Inona no avelany hataonao? Eny, ankoatry ny famoretana horonantsary, dia misy fampiasa hafa saingy tsy maintsy tadidinao fa ny kinova maimaim-poana dia hanampy watermarks amin'ilay horonan-tsary, noho izany, raha tsy tianao hitranga izany, na ianao mividy azy, na mandeha ianao amin'ny safidy hafa.
Raha ny famoretana ny programa dia mamela anao hitahiry azy mifototra amin'ny kalitao tadiavinao, manova ny masontsivana toy ny video sy ny audio codecs, ny tahan'ny tahan'ny, ny tahan'ny bit, sns. Ho very kalitao ianao, fa hifehezana ohatrinona.
Izy io angamba no iray amin'ireo mpamoaka horonantsary tsara indrindra eran-tany. Afaka miaraka amin'izany ianao manapaka, mamorona, mametaka ... izay horonan-tsary, ary ny iray amin'ireo asany dia ny famoretana ny horonan-tsary. Izy io dia manao izany amin'ny alàlan'ny fampihenana ny famahana ny horonantsary, fa azonao atao koa ny manova ny masontsivana hafa toy ny zana-kazo isan-tsegondra na ny tahan'ny fanovozan-kevitra. Hamela anao hanapaka ny ampahany amin'ilay horonan-tsary tsy mandeha aza.
Manana kinova roa ianao, ny iray maimaim-poana, izay, toy ny amin'ny Freemake, dia manampy watermarks na ilay kinova aloa.
Misy pejy web hanovana video?
Ankehitriny rehefa niresaka momba ny programa izahay dia mety aleonao zavatra haingana kokoa. Misy: amin'ny alàlan'ny pejy web izay tsy ilainao fotsiny ny mampakatra ireo horonan-tsary ary mamaritra ireo masontsivana mba hahafahanao minitra vitsy dia voafintina ilay horonan-tsary vaovao ary kely lanja kokoa ny horonan-tsary.
Raha tsy manahy ianao amin'izay nolazainay anao momba ny fahaverezan'ny fifehezana an'io horonantsary io dia manana izany ianao toy ny safidy ireto pejy ireto:
Anjaranao izao ny manapa-kevitra amin'izay tianao hamehezana horonantsary, na amin'ny programa amin'ny solosainao na amin'ny tranokala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Horonan-tsary
Borosy Photoshop tsara indrindra
Ahoana ny fomba hanaovana gif amin'ny horonan-tsary